साप्ताहिक संवाददाता , वैशाख ११, २०७६
बाथरुम सामग्रीहरुको बजारमा विश्वव्यापीरुपमै अग्रणी ब्रान्ड रोका गुपले नेपाली वजारमा आफ्नो व्यापारलाई बलियो उपस्थित गराएको छ । बजार विस्तारका क्रममा रोका ग्रुपले काठमाडौं, पोखरा र बुटवलमा चार वटा सोरुमहरु खोलेको छ । पुरा पढ्नुहोस्
आमिर खान एकपटक फेरि सानो पर्दामा पुनरागमन गर्दैछन् । सूत्रहरूका अनुसार टिभी शो ‘तुफान आलय’मार्फत आमिरले सानो पर्दामा इन्ट्री गर्न लागेका हुन् । यो शोको खास विशेषता यसमा आमिरका साथ उनकी पत्नी किरण राव पनि देखा पर्नु पनि हो । पुरा पढ्नुहोस्
अभिनेता प्रदीप खड्कालाई स्टार बनाउने चलचित्र प्रेमगीतको तेस्रो सिक्वेलका लागि मिस नेपाल इन्टरनेसनल–२०१८ नीति शाहसमक्ष प्रस्ताव राखिएको बताइन्छ । चलचित्रका निर्माताले नीतिलाई प्रेमगीत–३ को वानलाइन स्टोरी सुनाइसकेका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
फेसनविद्हरूका अनुसार वर्ष २०७५ मा धुम मच्चाएको एनिमल प्रिन्टको प्रभाव वर्ष २०७६ मा समेत कायमै रहनेछ, जसअन्तर्गत लियोपार्ड स्पट्स, जेब्रा पिन्ट, स्नेकस्किन बढी लोकप्रिय हुने बताइएको छ । यसैगरी वर्ष २०७५ मा लोकप्रिय रहेको टाइ एन्ड डाइ स्टाइलले पनि वर्ष २०७६ मा निरन्तरता पाउने अनुमान गरिएको छ । पुरा पढ्नुहोस्
महिलाको अर्को क्रिकेट लिग
नेपाली महिला क्रिकेटको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो, खेलाडीले खेल्न नै पाउँदैनन् र यो किन भन्दा नेपालमा महिला क्रिकेट प्रतियोगिता नै हुँदैनन्, तर अहिले आएर एकसाथ दुई ठूला प्रतियोगिताको घोषणा भएको छ । पुरा पढ्नुहोस्
डा. राजेन्द्र भद्रा, वैशाख ११, २०७६
योनि मांसपेशीले बनेको एकदमै लचिलो वा भनौं तन्किन सक्ने गुण भएको नली आकारको अंग हो, जसको लम्बाइ सामान्यतया ३ देखि ४ इन्च हुन्छ । योनि नली आकारको अंग भए पनि पाइपको जस्तो जतिबेला पनि प्वाल वा खाली ठाउँ रहेको स्थिति भने हुँदैन । पुरा पढ्नुहोस्
रामकृष्णको ‘विश्वास’ मा केकी अधिकारी
गायक रामकृष्ण निरौलाको ‘विश्वास’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । डा. भोला रिजालको शब्द तथा नरहरी प्रेमीको संगीत रहेको गीतको भिडियोमा केकी अधिकारी, आरसी थापा र सोन्हार श्रेष्ठलाई फिचर्ड गरिएको छ । पुरा पढ्नुहोस्
चलचित्र ‘कठपुतली’को पहिलो पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ । हरर जनरमा निर्माण भएको चलचित्रको पोस्टरले चलचित्रको थिमलाई प्रष्टाएको छ । राजाको दरबार भिक्र हुने त्रियाकलापलाई काल्पनिक रुपमा यो चलचित्रमा प्रस्तुत गरिएको छ । पुरा पढ्नुहोस्
चर्चित फिल्म निर्माण कम्पनी आसुसेन फिल्म प्रोडेक्सनले निर्माण गर्न गैरहेको चलचित्र प्रेम गीत ३ आगामी चैत २८ गते देशभर सार्वजनिक हुने भएको छ । निर्माता सन्तोष सेनले यो मितिमा चलचित्र प्रदर्शन गर्ने पक्का भएको पुष्टि गरे । पुरा पढ्नुहोस्